Yeemvakalelo zakho advert malunga ne-China ke 'leftover abafazi' uyaya viral - BBC News
Yeemvakalelo zakho advert malunga ne-China ke ‘leftover abafazi’ uyaya viral – BBC News
Lo mba unmarried females, rhoqo stigmatized njengoko ‘sheng nu’ okanye leftover abafazi, sele kukudala sele a isihloko se nkxalabo kwi base ukuba prioritizes umtshato kwaye motherhood kuba abafazi. Ngokuba ‘Umtshato Kwimakethi Takeover’, zine -ngomzuzu elide documentary-isimbo ividiyo waba igunyazise yi-Isijapanese ubuhle isigebenga SK-II. Kwi-ingxelo BBC, SK-II Umongameli Markus Strobel yathi advert yaba yinxalenye ‘a global phulo ukuba phembelela kwaye ukuxhobisa abafazi ukuba imilo zabo destiny’. ‘Wefilim kuzisa ukukhanya ukuba i-real-ubomi mba ka-talented kwaye brave Isitshayina abafazi ndinovelwano pressured ukufumana watshata phambi kokuba jika, kuba uloyiko ekubeni labelled ‘sheng nu. China ke ruling Communist Umntu ezama ukuba urge omnye abafazi enye, linganisa a enkulu ngokwesini imbalance yintsholongwane i-kutshanje ophele ngowama-one-umntwana mgaqo-nkqubo. Kodwa ngokunxulumene Leta Hong Fincher, umbhali ‘Leftover Abafazi: Resurgence ka Isini Nokungalingani kwi-China’, omnye Isitshayina abafazi zi ku – ‘a real ukuguqula incopho’ kwaye abaninzi ngabo ekuqaleni ukuya kwamkela kuphela ukuzonwabisa kwaye tyhala umva le. Yena wathi, i-BBC: ‘Aba ngabo young abafazi kunye nokomelela kwaye ukukholosa, abamele ekubeni ukhangele ekujoliswe kuzo ngokuthi urhulumente ke deliberate phulo ukuba koxinzelelo, kumlilo marrying. Isitshayina abafazi namhlanje ingaba ngakumbi educated kunangaphambili, kwaye ngabo kujike resisting umtshato. ‘MS Hong Fincher, owathi encinane kokubonisana indima ebalulekileyo kwi-vidiyo, wathi yintoni eyenziwe ngayo ingakumbi anamandla waba ukuba depicted ‘ukuthelekisa state’ abafazi kweli lizwe. ‘Le nto inyaniso waxelelwa kwi kakhulu creative, uyise kwaye empowering ndlela: ukuba ezi abafazi ingaba ezikhokelela omkhulu ubomi ngeendlela ezininzi, ekubeni omnye,’ watsho. ‘Kodwa torture experienced yi-abafazi ekuphatheni phandle ngokuchasene ngamandla umtshato koxinzelelo kanjalo kakhulu lokwenene. Ke ubonisa inyaniso ke ngoko, abaninzi umbutho woomama iingcali kwi-China. ‘Ngexesha intliziyo ividiyo ngu heartfelt ubungqina ukususela abafazi nabo, kunye abanye france phantsi xa enxulumene iingxaki, bathi ubuso ekubeni omnye. ‘Kwi-Isitshayina inkcubeko, ehlonipha abazali bakho yeyona nto ibalulekileyo umgangatho. Kwaye hayi yokufumana watshata unje wemiceli-impawu ka-disrespect, usharedi omnye umfazi, nowathi kamva lwaphukile kwi-tears. ‘Sisoloko wayecinga ukuba intombi yethu wayenolwazi olukhulu personality. Kodwa yena ke nje wesiqhelo-ukujonga, hayi kakhulu pretty. Ukuba ke kutheni yena ke leftover, watsho omnye umama wakhe, abo bahlala elandelayo wakhe nentombi abo balingwe ekulweni emva tears.
ngomhla lemveliso ke igosa isiqhagamshelanisi kutsalwe amakhulu amawaka yehlabathi izimvo kwaye waba usharedi widely phakathi Facebook abasebenzisi. Kwi-China, ividiyo bafumana ngaphezu, likes kwaye waba usharedi vala, phinda-phinda kwi SK-II ke igosa Sin Weibo-akhawunti. Kokuba kutsalwe enkulu psalms ukusuka vocal netizens kwi ethandwa kakhulu oomatshini-blogging site kwaye prompted a ezinzima ngxoxo. ‘Wonke umfazi ke oyikhethileyo, kufuneka respected kwi-civilized society,’ commented Weibo umsebenzisi Lotus Imbewu Ezingundoqo. Cecilia Leung ukusuka Beirut commented: ‘ndim kuphela kubekho inkqubela kwaye mna luyafuneka ukubona oku ad, undixelele ukuba andinguye yedwa, kwaye andinguye ayilunganga kuba wam nemigaqo yokusebenzisa imichiza. Omnye kusenokuba ndonwabe ngaphandle umntu, kwaye thina shouldn khange kohlwaywa ngenxa yethu nemigaqo yokusebenzisa imichiza ebomini xa sinalo na wronged abanye. ‘Omnye umsebenzisi kokuba oku share: ‘Ubudala kuphela inani kwaye akufunekanga isetyenziswe ukuba gauge wonke umntu ke, iinjongo ebomini, ke ezahluka-hlukileyo. Ukuba oodade abathe kanti ke ukukhawulelana neemfuno zabo, umphefumlo wam-mates, musa kuncama ithemba kwaye nimamele kuphela ukuba intliziyo yakho. Hayi nkqu abazali bakho, kuba kuphela uyazi yintoni ilungelo kuba ngokwakho. Kwaye ukuba wena musa, musa grieve kodwa celebrate ubomi bakho. ‘Iphela ngomhla we-a qaphela, advert ubona omnye abasetyhini kunye nabazali babo makhaya ‘umtshato kwimakethi’. Ezi ‘kwamanye amazwe’ ikholisa indawo kuba abazali ukuba ushiye posters ukwenza uluhlu iinkcukacha zabo unmarried abantwana, hopes ka-ingxowa-ukufanisa. Noko ke, kule meko, abazali bamele eziboniswe posters neentombi zabo, kunye imiyalezo kuba abazali babo. Ngobunye iphowusta, xelela umfazi wakhe abazali: ‘akunyanzelekanga ukuba ufuna ukufumana watshata nje ngenxa umtshato.
Mna uphumelele khange abe ninoyolo ukuba indlela
Ndinguye endaweni igama elithi ‘leftover umfazi’, utshilo omnye, ekhuselekile ukongeza: leftover abantu’ kufuneka uzame harder. ‘Kodwa ingaba omnye abafazi of China khangela real ndonwabe endings – apho ekuhlaleni uza ngokwenene yamkela zabo nemigaqo yokusebenzisa imichiza. ‘Ngalo mzuzu, ukuba kuphela quanta,’ utshilo MS Hong Fincher, ukongeza ukuba ‘incredible angst, personal torture kwaye societal pressures’ depicted kwi-advert ingaba? prevalent. ‘Umtshato kwi-China kubaluleke kakhulu kasolusapho nabafazi kufuneka bona okokuba ekubeni omnye ufumana into kuba celebrated, hayi ukuba abe neentloni,’ wakhumbula utshilo. ‘Kodwa ndiyakholwa ukuba oku trend yabasetyhini abo khetha abe omnye kwaye elizimeleyo ngu ke yandisa kwaye esi sisiqalo. ‘